Dhinaca Miisaanka Geek, Ku qiimee tan! | Martech Zone
Miisaanka Geek, Ku qiimee kan!
Wednesday, May 23, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Sheekooyinka Sayniska, si la yaab leh, maahan nooca aan ugu jeclahay madadaalada. Waxaan ahay inbadan 300 iyo Hulk nooca nin! (Jacayl, huh?) Tani waa wax aad ufiican in la run sheego, in kastoo… taxane saynis fiyeed cabsi leh oo la yiraahdo Sanctuary in aad ku bixin karto $ 1.99 halkii 'web-ka' adoo maraya PayPal oo soo dejiso! Sideed ku khaldami kartaa ?!
Muuqaalku wuxuu umuuqday iskudhaf CSI, Sci-Fi, Mystery, Thriller, Movie cabsi badan iyo Buugga majaajillada. Shineemadu waa mid heer sare ah. Sidoo kale waa taxanihi uguhoreeyay ee lasii daayo laguna qaybiyo webka sidan. Had iyo jeer waxaan ku leeyahay dhowr lacag dheeraad ah koontadayda 'PayPal' akhristayaasha naxariista leh ee igu qanacsan plugin horumarin. Mararka qaarkood waxaan u gudbiyaa dadyowga kale ama aniga ayaa isku daaweeya wax. Caawa, waxaan isku daaweeyay webka ugu horeeya ee Sanctuary.
Caawa sidoo kale wiilkayga saaxiibada '' habeenkii wax karinta '. Way ka nabad badan yihiin usbuucii la soo dhaafay markii ay gubeen cunnadii Hindida, wiilkay saaxiibbadiis waxay u kariyeen canjeelo cid kasta oo rabta inay soo dhaafto. Waxay kariyeen ilaa 200 oo canjeero ah waxaanan dhex marinnay darsin ama ku dhowaad dhalinyaro ah. Waxay ku maydheen Dhagaxa Buurta (dabcan).
Ka dib casho canjeero ah, waxaan soo degsaday websaydhkii ugu horreeyay. Waxaan ka beddelay faylka 'Quicktime .mov' oo aan u beddelay feylasha AppleTV .m4v anigoo adeegsanaya Quicktime Pro oo ku yaal MacBookPro. Ka dib ayaan u soo dhoofiyay iTunes-ka laptop-kayga kumbuyuutarradayda waxaanan silig ugu xirtay AppleTV-ga. Markii aan halkaa gaadhay, waxaan ka daawaday Telefishankayga!
Sidee qabow waa taas? Waan hubaa in tani ay tahay mid ka mid ah waxyaabihii ugu fiicnaa ee aan abid sameeyo! Oh, iyo Sanctuary waa qabow xun. Waxaan rajeynayaa qeybta xigta ee webka!
Koofiyad Koofiyad ah oo loogu talagalay Steven at WinExtra. Oo waxaa jira a Blog Sanctuary!
My Masterpieces ugu weyn
Meheraddaadu ma ka warqabtaa afartaas mitir ee muhiimka ah?
Waxaan shalay wax ka qoray .. si fudud haddii aan u dhigo waan qaataye
Waxaan gabi ahaanba ku ilaaway caarada koofiyadeyda adiga, Steven! Waan ka xumahay! Way jirtaa hadda, taasi waa sidaan ku helay Sanctuary.
dhib maahan Douglas 🙂
btw ma ogaan doontid shabakad wanaagsan 2.0 midab ku qor WordPress. Waxaan u baahanahay mid dib loogu soo celiyo baloog kale (haddii aad sameyso waxaad mar walba email u diri kartaa oo aad wax ka beddeli kartaa si aad uga saarto wicitaankan :))
Law of jiidashada
Sanctuary weligeed kama maqlin arrintaas… laakiin sharraxaadda waxay u muuqataa codad qiimahoodu yahay $ 2 😀
Laakiin xoogaa AppleTV xaqiiqdii waxay u muuqdaan kuwo qabow… Wali waxaan isku dayayaa inaan madaxayga ku wareejiyo hadalkaas